Eurovision 2018-2019၊ သင်သိရန်လိုအပ်သောအရာများ၊ ရက်စွဲများ၊ နေရာနှင့်အခြားအရာများ အ | အားလပ်ခွင့်ပေးပါ
Gabriela moran | | ဂီတသတင်းများ, အဆိုတော်များ, ယေဘုယျ, ဂီတ
ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရဥရောပသည်၎င်း၏ဂန္ထဝင်သီချင်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလေ့ရှိသည် ဥရောပအသံလွှင့်အစည်းအရုံး (EBU) မှအဖွဲ့ဝင်အားလုံးပါ ၀ င်သည်မရ။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပရိသတ်အများဆုံးရှိသောနှစ်စဉ်ဂီတပွဲတော်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံတကာတွင်ကြည့်ရှုသူသန်း ၆၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကို ၁၉၅၆ ခုနှစ်မှစ၍ အဆက်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ရှေးအကျဆုံးတီဗီပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အသက်ဝင်ဆဲဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ပွဲတော်သည် ၂၀၁၅ တွင်ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ရရှိခဲ့သည်။ ယခုနှစ် Eurovision 2018 ကိုပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ Lisbon မြို့၊ Altice Arena ၌မေလ ၈ ရက်၊ ၁၀ ရက်နှင့် ၁၂ ရက်တို့တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
ပွဲတော်သည်အမျိုးအစားကိုအဓိကမြှင့်တင်ရန်လူသိများသည် pop ။ မကြာသေးမီကကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည် တန်ဂို၊ အာရဗီ၊ အက၊ ရက်ပ်၊ ရော့၊ ပန့်ခ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဂီတမရ။ Eurovision 2018 တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုရှာဖွေရန်ဆက်ဖတ်ပါ။
1 Eurovision 2018 အကြောင်းအရာနှင့်အထွေထွေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
1.1 ဆီမီးဖိုင်နယ် ၁
1.2 ဆီမီးဖိုင်နယ် ၁
2 eurovision နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်များ ...
3 Eurovision 2019 အတွက်ပြင်ဆင်ပါ။
Eurovision 2018 အကြောင်းအရာနှင့်အထွေထွေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အဓိကဆောင်ပုဒ်မှာ "အားလုံးရပ်!" စပိန်သို့ "သင်္ဘောပေါ်တွင်အားလုံး" ဟုဘာသာပြန်သည်။ ဟိ အကြောင်းအရာသည်အိမ်ရှင်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအတွက်အခြေခံကျသောကဏ္ aspect ကိုကိုယ်စားပြုသောသမုဒ္ဒရာနှင့်ရေကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများ၏အရေးပါပုံကိုဆိုသည်မရ။ အမှတ်တံဆိပ်သည်မတူကွဲပြားမှု၊ လေးစားမှုနှင့်သည်းခံစိတ်တို့၏တန်ဖိုးများကိုပို့လွှတ်သောခရုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ပွဲအားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည် Silvia Alberto, Catalina Furtado, Filomena Cautela နှင့် Daniela Ruahမရ။ Eurovision 2018 တစ်ခုရှိတယ် နိုင်ငံပေါင်း ၄၃ နိုင်ငံမှပူးပေါင်းပါဝင်မှု အနိုင်ရသူမှာအစ္စရေးအဆိုတော်နှင့် DJ Netta Barzilai ဖျော်ဖြေသော "Toy" သီချင်းဖြင့်အစ္စရေးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဒီသီချင်းကိုပွဲတော်မတိုင်ခင်လတွေမှာဆုအကြိုက်ဆုံးတွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်ပြသခဲ့တယ်။ ပွဲစဉ်တိုင်းတွင်ရှုံးထွက်ပွဲများပါ ၀ င်သည်။ ဆီမီးဖိုင်နယ် ၂ ကြိမ်နှင့်ပွဲစဉ်အမျိုးမျိုး၏နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲ
ပွဲတော်မစမီဆီးမီးဖိုင်နယ်မဲခွဲခြင်းကိုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် ပေါ်တူဂီ၊ စပိန်၊ ဂျာမနီ၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်နှင့်အီတလီတို့သည်ဖိုင်နယ်သို့အလိုအလျောက်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြသည်ဌ ကျန်နိုင်ငံများသည်မေလ ၈ ရက်နှင့် ၉ ရက်တို့တွင်ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်နှစ်ကြိမ်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည် ဆီမီးဖိုင်နယ်တစ်ခုစီ၌မဲအများဆုံးရရှိသောနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံသည် ၁၂ ရက်တွင် Grand Final သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့တွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၉ နိုင်ငံပါ ၀ င်သည် မေလ 8မရ။ Eurovision 1 ၏ဆီမီးဖိုင်နယ် ၁ ညတွင်ယှဉ်ပြိုင်သောနိုင်ငံများစာရင်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အစ္စရေး၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ Austစတြီးယား၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ အိုင်ယာလန်၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ လစ်သူရေးနီးယားနှင့်ဖင်လန်နိုင်ငံတို့မှ ၁၀ နိုင်ငံသာ၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးအဆင့်သို့တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။
အရုပ်။ ဖျော်ဖြေသူ - Netta (အစ္စရေး) - ၂၈၃ မှတ်
မီး။ ဖျော်ဖြေသူ - Eleni Foureira (Cyprus) - ၂၆၂ မှတ်
ငါ့ကိုလိမ်ပါ။ ဖျော်ဖြေသူ Mikolas Josef (ချက်သမ္မတနိုင်ငံ) - ၂၃၂ မှတ်
မင်းကလွဲပြီးဘယ်သူမှ ဖျော်ဖြေသူCesár Sampson (သြစတြီးယား) - ၂၃၁ မှတ်
La Forza ဖျော်ဖြေသူ Alekseev (ဘီလာရုစ်) - ၂၀၁ မှတ်
ဟိ မေလ 10 နိုင်ငံပေါင်း ၁၈ နိုင်ငံမှပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
နော်ဝေ၊ ဆွီဒင်၊ မော်လ်ဒိုဗာ၊ သြစတေးလျ၊ ဒိန်းမတ်၊ ယူကရိန်း၊ နယ်သာလန်၊ စလိုဗေးနီးယား၊ ဆားဘီးယားနှင့်ဟန်ဂေရီတို့ပါ ၀ င်သည်။
ဒုတိယဆီမီးဖိုင်နယ်တွင်မဲအများဆုံး ၅ ဦး ကိုအောက်တွင်ပြထားသည်။
မင်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးတာဒါပဲ။ ဖျော်ဖြေသူ Alexander Rybak (နော်ဝေ) - ၂၆၆ မှတ်
မင်းကိုကခုန်ပါ။ ဖျော်ဖြေသူ - Benjamin Ingrosso (ဆွီဒင်) - ၂၅၄ မှတ်
ငါ့ရဲ့ကံကောင်းတဲ့နေ့။ ဖျော်ဖြေသူ - DoReDos (မော်လ်ဒိုဗာ) - ၂၃၅ မှတ်
ငါတို့မှာအချစ်ရှိတယ်။ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူ Jessica Mauboy (သြစတေးလျ) - ၂၁၂ မှတ်
အဆင့်မြင့်မြေညီ။ ဖျော်ဖြေသူ: Rasmussen (ဒိန်းမတ်) - ၂၀၄ မှတ်
ည၏အံ့သြဖွယ်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်သို့တက်ရန်ယခင်လများအတွင်းပိုလန်၊ လတ်ဗီးယားနှင့်မော်လတာတို့၏အရည်အချင်းမပြည့်မီခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Eurovision 2018 သည်ရုရှားနှင့်ရိုမေးနီးယားသမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဆန်ကာတင်စာရင်းမ ၀ င်သောစာစောင်ဖြစ်သည်။
ဖိုင်နယ်ပွဲကြီးနေ့ကိုကျင်းပခဲ့သည် မေလ 12မရ။ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူများသည်ပထမနှင့်ဒုတိယဆီမီးဖိုင်နယ်မှခွဲခြားထားသောနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံမှဖြစ်ပြီး၊ အလိုအလျောက်ဖြတ်သန်းခွင့်ရှိသည့်ခြောက်နိုင်ငံအပြင်၊ ဒါကြောင့်စုစုပေါင်း Eurovision 26 တွင်နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ၂၆ ယောက် ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည် ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုအရမ်းကောင်းတဲ့ show တစ်ခုပေးတယ်။
2018 Eurovision နောက်ဆုံးအဆင့်အတွက်နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ၂၆ ဦး ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
ငါ့ကိုတစ်ယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ခွင့်ပြုပါ။ ဖျော်ဖြေသူ Michael Schulte (ဂျာမနီ) - ၃၄၀ မှတ်
Non mi avete fatto niente ။ ဖျော်ဖြေသူ: Ermal Meta & Fabrizio Moro - ၃၀၈ မှတ်
Nova Deca ဖျော်ဖြေသူ Sanja Ilić & Balkanika (ဆားဘီးယား) - ၁၁၃ မှတ်
ကုန်တိုက်၊ ဖျော်ဖြေသူ: Eugent Bushpepa (Albania) - ၁၈၄ မှတ်
ငါတို့အသက်ကြီးတဲ့အခါ ဖျော်ဖြေသူ Ieva Zasimauskaitė (လစ်သူယေးနီးယား) - ၁၈၁ မှတ်
သနားခြင်းကရုဏာ။ ဖျော်ဖြေသူ Madame Monsieur (ပြင်သစ်) - ၁၇၃ မှတ်
အရိုးများ။ ဖျော်ဖြေသူ - EQUINOX (ဘူလ်ဂေးရီးယား) - ၁၆၆ မှတ်
အတူတူ။ ဖျော်ဖြေသူ Ryan O'Shaughnessy (အိုင်ယာလန်) - ၁၃၆ မှတ်
လှေခါးအောက်။ ဖျော်ဖြေသူ: Mélovin (ယူကရိန်း) - ၁၃၀ မှတ်
သူတို့ကိုတရားမ ၀ င်။ ဖျော်ဖြေသူ: Waylon (နယ်သာလန်) - ၁၂၁ မှတ်
Viszlátnyár။ ဖျော်ဖြေသူ - AWS (ဟန်ဂေရီ) - ၉၃ မှတ်
Hvala, ne! ဖျော်ဖြေသူ - Lea Sirk (စလိုဗေးနီးယား) - ၆၄ မှတ်
မင်းရဲ့သီချင်းလေးပါ။ စကားပြန် - Alfred Garcíaနှင့် Amaia Romero (စပိန်) - ၆၁ မှတ်
မုန်တိုင်း။ ဖျော်ဖြေသူ: SuRie (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) - ၄၈ မှတ်
ဘီလူးများ။ ဖျော်ဖြေသူ Saara Aalto (ဖင်လန်) - ၄၆ မှတ်
ဒါမှမဟုတ် Jardim ဖျော်ဖြေသူCláudia Pascoal (ပေါ်တူဂီ) - ၃၉ မှတ်
ကြီးစွာသောမျှော်လင့်ချက်၊ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများနှင့်အကြိုက်ဆုံးများစာရင်းတွင်၎င်းအားကြေငြာခဲ့သည် ည၏အကြီးမားဆုံးအနိုင်ရသီချင်း: Toy! ဒီဂျေ / အဆိုတော်နှင့် Netta တို့ကကြီးကြီးရမှတ်ဖြင့်ဖျော်ဖြေသည်မရ။ သူမ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုကိုအဓိကထားသည်။ အ ၀ တ်၊ ဆံပင်၊
eurovision နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်များ ...
Netta Barzilai ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲချက်များအပြင်ဗိုလ်လုပွဲစဉ်တွင်ပြောစရာများစွာပေးခဲ့သောအခြားလုပ်ရပ်များလည်းရှိခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းသည် SuRie ၏ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွင်ပရိသတ်တစ် ဦး သည်စင်မြင့်ထက်သို့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုယူခဲ့သည် သူ၏နိုင်ငံရေးအတွေးအမြင်အချို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်၎င်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကော်မတီသည်နောက်ပိုင်းတွင် SuRie ကိုထပ်တလဲလဲဖျော်ဖြေရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်းကမ်းလှမ်းမှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးပြပွဲသည်ယခင်သတ်မှတ်အချိန်ဇယားအတိုင်းဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, တရုတ်ကပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲရဲ့အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုရည်ညွှန်းတဲ့သင်္ကေတ (သို့) အကများပြသတာကြောင့် Eurovision 2018 ၏ပထမ semifinal တွင် EBU သည်ထိုနိုင်ငံရှိဘူတာရုံနှင့်၎င်း၏စာချုပ်ကိုဆိုင်းငံ့ထားသည် ဂီတမှတဆင့်၎င်းတို့သည်မြှင့်တင်ရန်နှင့်အောင်ပွဲခံရန်ကြိုးစားနေသောအားလုံးပါဝင်သောတန်ဖိုးများသို့ညှိထားသောပါတနာမဟုတ်ကြောင်းငြင်းခုံခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်ကတော့ဖြစ်ခဲ့တယ် ဒုတိယအကြိမ်ဆီမီးဖိုင်နယ်နှင့်ဗိုလ်လုပွဲစဉ်များထုတ်လွှင့်မှုအားရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
Eurovision 2019 အတွက်ပြင်ဆင်ပါ။
ငါတို့မှာအစ္စရေးကငါတို့ရဲ့နောက်အိမ်ရှင် အစ္စရေးသည် ၁၉၇၉ နှင့် ၁၉၉၉ တို့တွင်အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်နှစ်ကြိမ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
EBU သည်အခမ်းအနားကိုလက်ခံကျင်းပမည့်မြို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်ကြေငြာခဲ့သည် Eurovision 2019 အတွက် Tel Aviv နေ့ရက်များတွင်ကျင်းပလိမ့်မည် မေလ 14, 16 နှင့် 18 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန (Expo Tel Aviv) တွင်
ပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည် လူ ဦး ရေ ၁၀, ဝဝဝခန့်ဆံ့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၏ Pavilion 2မရ။ ဤအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက Eurovision 2019 သည် Lisbon ရှိယခင်ထုတ်ဝေမှုထက်သေးငယ်သည့်စွမ်းရည်ရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်အစ္စရေးနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးသတင်းစာများထဲမှတစ်ခုကကြေညာခဲ့သည် လက်မှတ် ၄ သောင်းသာရောင်းပါမည်မရ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူ ၂ ထောင်၏အာကာသကိုကင်မရာများနှင့်ဇာတ်ခုံတို့ဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိမ့်မည်၊ ကျန်သူများသည်ဥရောပအသံလွှင့်အစည်းအရုံးအတွက်သီးသန့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် လက်မှတ်များကိုဒီဇင်ဘာနှင့်ဇန်နဝါရီလကြားတွင်စတင်ရောင်းချသည်မရ။ ဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စျေးနှုန်းများသည်နှစ်စဉ်ကွဲပြားသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်မည်သည့်သတင်းကိုမဆိုသတိပြုရမည်။ အလယ်အလတ်စျေးနှုန်းများရှိသည် ဆီမီးဖိုင်နယ်တစ်ခုစီအတွက်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်မှာယူရို ၆၀ နှင့်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲအတွက်ယူရို ၁၅၀ ဖြစ်သည်။
ပထမသို့မဟုတ်ဒုတိယအချီ၌သင်၏လက်မှတ်မရလျှင်စိတ်မပျက်ပါနှင့်။ ဤကဲ့သို့သောပွဲစဉ်များတွင်လက်မှတ်ရောင်းပွဲများကိုရောင်းထွက်ရန် (သို့)“ ရောင်းထွက်သည်” ဟူသောပွဲများအတွက်ပွဲရက်များအတွက်ကြိုတင်လက်မှတ်များရယူထားနိုင်သည်။ သို့သော်ပြိုင်ပွဲတက်ရောက်ရန်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုများပြားလာစေရန်ပြုလုပ်နိုင်သည် တရားဝင် Eurovision fan club များနှင့်ပူးပေါင်းရန်အကြံပြုလိုပါသည် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်လက်မှတ်တွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ပါ။ နေရာသည်ဇာတ်စင်နှင့်နီးသည်။
နာမည်ကျော်အစ္စရေးမင်းသမီး Gal Gadot သည်Erurovisión 2019 ကိုကျင်းပရန်ဖိတ်ကြားခံရပြီးသူမ၏ပါဝင်မှုကိုအတည်မပြုရသေးပါ။
Tel Aviv, Eilat နှင့် Jerusalem တို့ကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်ဖြစ်နိုင်သောမြို့သုံးမြို့ရှိခဲ့သည်၊ ထိုပွဲတော်များသည်ယခင်နှစ်များကကျင်းပခဲ့သောပွဲစဉ်နှစ်ခုတွင်ကျင်းပခဲ့သည့်နေရာများဖြစ်သည်။ ပွဲစီစဉ်သူများကအဆိုပြုချက်အားလုံးသည်စံပြဖြစ်သော်လည်း Tel Aviv သည်ပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးအဆိုပြုချက်နှင့်မြို့နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းအတည်ပြုသည်။ အခုထိပွဲတော်တစ်ခုရှိတယ် နိုင်ငံ ၃၀ ပါဝင်ခြင်း။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာနေရာအဖြစ်အစ္စရေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲအချို့ရှိပါတယ်မရ။ faces သရေလမျက်နှာများ ခက်ခဲသောနိုင်ငံရေးအခြေအနေ ထို့ကြောင့်သဘောထားကွဲလွဲမှု၏အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ၎င်း၏နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်နှင့်အခြားနိုင်ငံများအားဆန့်ကျင်သည့်လုပ်ရပ်များဖြစ်သည်။ အစရှိသောနိုင်ငံများဖြစ်သည် ယူကေ၊ ဆွီဒင်နှင့်အိုက်စလန်တို့ကထိုနိုင်ငံတွင် Eurovision ကျင်းပခြင်းသည်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆပြီး၎င်းအားပွဲမှထုတ်ပယ်ရန်အဆိုပြုသည်။
ထို့အပြင်အဆိုပါ EBU သည်သူတို့၏သင်တန်းများဆက်လက်တက်ရောက်ရန်အစီအစဉ်များအတွက်ပွဲ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသည်အဓိကဖြစ်ကြောင်းကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၀ န်ကြီးချုပ်သည်ရှုထောင့်အားလုံး၌လုံခြုံမှုနှင့်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကိုအာမခံရန်မျှော်လင့်ပြီးပရိသတ်အားလုံးသည်မည်သည့်လူမျိုးမဆိုပွဲသို့တက်ရောက်နိုင်သည်။ သူတို့သည်တန်ဖိုးထားလေးစားမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည် ပါဝင်မှုနှင့်ကွဲပြားမှုသည် Eurovision ပွဲစဉ်များအတွက်အခြေခံကျသည် ဖြစ်၍ လေးစားရမည် အိမ်ရှင်နိုင်ငံအားလုံးမှ
သံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲဂီတသည်လူ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုများကိုစုစည်းစေပြီးလူအုပ်ကြီးအားတေးနှင့်စာသားများမှတဆင့်ဆက်သွယ်စေသည်။ ရဲ့တရားဝင် page ကိုလာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Eurovision ၂၀၁၈ ထုတ်ဝေမှုနှင့်နောက်နှစ်တိုးတက်မှုအတွက်အသေးစိတ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အားလပ်ခွင့်ပေးပါ » ယေဘုယျ » Eurovision 2018-2019